Moa ve ny Fikarohana Feo eo An-tampon'ny Varotra Manova? | Martech Zone
The Amazon Show mety ho ny fividianana tsara indrindra nataoko tato anatin'ny 12 volana. Nividy iray ho an'ny Reniko aho, izay mipetraka lavitra ary matetika manana olana amin'ny fifandraisana finday. Ankehitriny, azony atao fotsiny ny miteny ny Show mba hiantso ahy ary manao antso an-tsary isika ao anatin'ny segondra vitsy. Tena tian'ny Neny izany ka nividy iray ho an'ny zafikeliny izy mba hahafahany mifandray amin'izy ireo ihany koa. Haiko koa midina ary manaova veloma amin'ny alikako, Gambino, rehefa tsy eo mandritra ny fotoana kelikely aho. Mahita ahy izy, mivovo, ary mazàna mijery any ambadiky ny fitaovana izy mba hahitako hoe ahoana ny fombako mifanaraka amin'izany.
Apple homepod vao avy namidy ho toy ny safidy premium miaraka amina mpandahateny marani-tsaina sy ny fampidirana iOS henjana. ary Google Home no vahaolana mora vidy amin'ny fampidirana Android. Tsy mampino ny fifaninanana rehetra. Na dia fanboy Apple aza aho dia matahotra sao ny kolontsain'ny Apple amin'ny fifehezana dia mety hahavery azy ireo amin'ny ady maharitra. Amazon dia manana maritrano mivelatra ary am-polony maro fahaiza-manao an'arivony efa misy afaka mifandray amin'ny serivisy na fitaovana saika.
Raha ao amin'ny Siri ianao ary misoratra amin'ny podcast anay, dia azonao atao ny mangataka amin'i Siri Alefaso ny Podcast Interviews Martech!
Raha ao amin'ny Google Home ianao dia afaka miteny Alefaso ny Podcast an'ny Martech Interviews farany!
Ho an'i Amazon, ampio ny Fahaizana AnyPod ary mangataha, Alexa, Alexa, mangataha AnyPod hisoratra anarana amin'ny Martech Interviews.
Miverina amin'ny fitondran-tena mividy… Capgemini fanadihadiana mpanjifa maherin'ny 5,000 any Etazonia, UK, France ary Alemana hahafantarana ny fomba fifandraisan'izy ireo amin'ny fitaovana am-peo - mikasika manokana fividianana fitondran-tena. Ny fikarohana be dia be dia niaraka tamin'ny fifanakalozan-kevitra ifantohan'ny vondrona sy ny mpanjifa isaky ny firenena, natao saika. Ny fanadihadiana - ary koa ny fifanakalozan-kevitra momba ny vondrona ifantohana - dia nahitana fifangaroana demografika sy persona mpampiasa / tsy mpampiasa.
Ireo mpanampy amin'ny feo dia hanova tanteraka ny fifandraisan'ny marika sy ny mpanjifa. Ny tena mahaliana ny mpanampy ny feo dia izy ireo voarindra amin'ny volon'ny fiainantsika, manolotra fahatsorana sy harena amin'ny fifandraisana izay mbola tsy niainan'ny mpanjifa hatrizay. Ireo marika afaka manararaotra ny filan'ny mpanjifa manodidina ny mpanampy feo dia tsy vitan'ny hoe hanangana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny mpanjifany, fa hamorona tombony lehibe ho an'ny tenany ihany koa. Mark Taylor, Chief Experience Officer, fampiharana ho an'ny mpanjifa nomerika, ao Capgemini
Ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanjifa momba ny varotra am-peo:
Ireo mpanam-peo dia hanavao ny ecommerce - Ny mpanjifa dia mamorona safidim-piraikitra matanjaka amin'ny fifaneraserana amin'ireo orinasa amin'ny alàlan'ny mpanampy amin'ny feo. Ireo mpampiasa mpanampy ny feo dia mandany 3% amin'ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mpanampy am-peo, saingy antenaina hitombo 18% ao anatin'ny telo taona ho avy io, hampihena ny anjaran'ny fivarotana ara-batana (45%) sy tranokala (37%). Raha ny mozika mivantana sy ny fikaroham-baovao no mijanona ho fampiasa indrindra ho an'ireo mpanampy am-peo ankehitriny, maherin'ny ampahatelon'ny mpamaly (35%) koa no nampiasa azy ireo hividy vokatra toy ny fivarotana, ny tokantrano, ary ny akanjo.
Ny mpanjifa dia afa-po amin'ny fanandramana feo - Ireo mpanjifa mampiasa mpanampy am-peo dia miabo be amin'ny zavatra niainany, miaraka amin'ny 71% afa-po amin'ny mpanampy ny feony. Manokana, 52% ny mpanjifa mitanisa ny fahamoran'izy ireo, ny fahaizana manao zavatra tsy misy tanana (48%), ary mandeha ho azy ny lahasa miantsena mahazatra (41%) ho antony lehibe indrindra mahatonga azy ireo aleony mampiasa mpanampy am-peo noho ny fampiharana finday sy tranokala. Ny fahaiza-manaon'ny feo mpanampy hahatakatra ny mpampiasa olombelona dia manakiana ihany koa; 81% amin'ireo mpampiasa no maniry ny hahatakaran'ilay mpanampy ny feo ny diksiônany sy ny lantom-peony.
Ireo mpanampy amin'ny feo dia hahazo tombony mivaingana ho an'ireo mpivarotra sy marika - Ireo marika manome traikefa ho an'ny feo tsara dia hiteraka raharaham-barotra sy fifanakalozan-kevitra tsara amin'ny vava. Hitan'ny tatitra fa 37% n'ny mpampiasa mpanampy ny feo no hizara traikefa tsara amin'ny namana sy fianakaviana, ary na dia ny 28% amin'ireo tsy mpampiasa ankehitriny aza dia te-hihetsika matetika kokoa miaraka amin'ny marika aorian'ny traikefa tsara. Mifanitsy amin'ny tombom-barotra matotra mety hitranga izany, satria vonona ny handany 5% bebe kokoa ny mpanjifa miaraka amina marika manaraka traikefa tsara miaraka amina mpanampy am-peo
Ny valim-pikarohan'i Capgemini dia ny orinasan'ny varotra dia mila manangana drafitra asa haingana hamoronana feon-kira Varotra ifanakalozana resaka tetika.
Ampidino ny taratasy
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy mpampifandray ato amin'ity lahatsoratra ity aho!
Tags: amazon alexaamazon echofampisehoana amazonaanypodpaoma homepodcapgeminiresakagoogle homefahaiza-manao podcastfozafeovarotra am-peofikarohana lalina
Hamoy ny asanao marketing amin'ny robot ve ianao?